Muva nje, iPhini likaMqondisi weBeijing Post Administration liholele ithimba e-Air Mail Processing Center ukuyophenya ngokusebenza kweposi lokungenisa nokuthumela kwamanye amazwe, ligxile ekuhlolweni kwe-disinfection kanye nokuvimbela ubhadane lwezifo zomhlaba wonke ...
Ngomhla wama-21, kube nezengezo ezintsha ezingaphezu kwezingu-180,000 emhlabeni, usuku oluningi kakhulu selokhu kwaqubuka lesi sifo. Ngesikhathi sendawo sama-22, inhloko yephrojekthi ye-WHO yezimo eziphuthumayo zezempilo uMichael Ryan wathi ukusabalala kwe-pneumonia entsha yenhliziyo emazweni amaningi anabantu abaningi ...
Ngubani oxwayisa 'ngenani lesibili'
Amazwe lapho ukuncipha kwezifo ze-coronavirus kusengabhekana "nenani lesibili elisheshayo" uma engashesha ukusheshe athathe izinyathelo zokunqanda lesi sifo, kuxwayisa iWorld Health Organisation (WHO) ngoMsombuluko. UDkt Michael J. Ryan, uMqondisi Omkhulu Ophethe we-WHO Health ...
Amacala Aqinisekisiwe eCoronavirus aseRussia Aphakeme angama-200,000
Isibalo sabantu abaqinisekisiwe ukuthi bane-coronavirus eRussia sesingaphezu kuka-200 000, imininingwane efakwe kwi-website esemthethweni esungulwe ngabaphathi bezempilo ikhonjiswe ngeSonto. Inani lamacala lenyuke laya ku-209,688 ngemuva kokuthi olunye uvivinyo olungu-11,012 lubuyile lutholile ...
Ukubheka Okungokoqobo Ekuhlolweni Kwamasosha Omzimba: Sigijimela Kanjani Phambili Ngokucabanga?
Ukuhlola Kungaba Ukhiye Ekuvulekeni Kabusha, Kepha Abanye Bathembisa ngokweqile Futhi Bangaphansi. Njengoba izikhulu zikahulumeni wase-US ziqala ukuphikisana ngezinyathelo ezifanele zokwehlisa imikhawulo ngenxa yenoveli coronavirus, ukuhlolwa kwamasosha omzimba kuthathwe njengokhiye wokubuyela kokujwayelekile. Lokhu t ethile ...
I-Thermometer Yeso “Ayitholakali”
Kutholakala kuzingxenyekazi ezinkulu ze-e-commerce ukuthi yize intengo ye-Infrared Thermometer ingama-yuan ayi-100-200 kuphela, iphelile ngokuphelele. Ukuthengwa kudinga ukwenziwa ngenqubo "yokukhokha idiphozi-ukukhokhwa kokugcina kokulethwa kokulethwa". Kuthunyelwe ngaphambi kwe-A ...
Ngabe Ufuna Isivumelwano Sodokotela Womndeni?
Ezikhathini zamuva nje, umkhuhlane uqhubekile nokwanda. UNksz Wang, owayenezinyanga ezinhlanu ekhulelwe, wayenokukhwehlela namakhala, ecabanga ukuthi “ushayiwe.” Ngenxa yokuthi bakhathazekile ngezingane ezisesiswini sabo, abalokothi bathathe umuthi; bayasaba isifo sesiphambano ...
Inkampani Yethu Inikele Ngezinsizakusebenza Kumayunithi Ahlukahlukene
Ntambama ngoFebhuwari 25, u-Hebei Evidence-Based Medical Technology Co, Ltd. unikele ngomnyango wokulinganisa izinga lokushisa, ikholomu yokulinganisa izinga lokushisa, amaski angu-1 000 nezingubo eziyishumi zokuzihlukanisa kuShijiazhuang Radio ne-TV Station ukulwela lolu bhubhane. ..
Ukubuka Usizo, Ukusiza I-Italy-Hebei People In Action
Izihloko zezindaba zaseChina · Hebei: Ama-coronavirus amasha ayagqashuka, nobhadane lusakazeka emhlabeni jikelele. Kusukela ngo-23: 00 ngoMashi 23, bangu-59,138 sebebonke abantu abatholakale betholakele e-Italy kanye nokufa kwabantu abayi-5,476, okwenza kwaba yizwe elinokuqhamuka okubi kakhulu kwezilwandle. Th ...